Si fudud Split / goo / Goo M4V Files
> Resource > Beddelaan > Sida loo Split / goo / Goo M4V Files
Ma doonaysaa in aan kala tagno file M4V ah dhowr qaybood oo aan dib-u-sireed? Raadiyey muddo dheer hareeraha, laakiin weli ma heli karaa xal la hubo in u gooyay files M4V? Haddii ay sidaas tahay, aad u yimaadeen inay meel sax ah. Tutorial Tani waxay inta badan diiradda ku saabsan sida loo kala qaybsan tahay files M4V galay clips la isticmaalayo habka aad u fudud. Taasi waa, in la isticmaalo a M4V splitter smart - Video Editor ( Filmroa u Mac (Originally Wondershare Video Editor for Mac) ).
Easy in la isticmaalo M4V Splitter: Filmora Wondershare (asal ahaan Wondershare Video Editor)
Waraaqda qayb kasta oo ka mid M4V video file galay hal.
Iska yaree M4V video aan khasaaro tayada wax.
Ku dar kala guurka, filtarrada, Jump Cut off ama wejiga si aad u hagaajisid video.
Save file M4V aad qaabab kala duwan, gubi in DVD ama si toos ah online geliyaan.
1. Import M4V files in this splitter M4V
Waxaa jira laba siyaabood oo kale si aad u soo dhoofsadaan faylasha M4V deegaanka si ay ugu album of this magaabay M4V. Mid ka mid ah waa in la garaaco "Import" button inay ku shuban files M4V; kale waa in la jiidayo files M4V in album lahayd. Next, waxaad u baahan tahay inaad jiidi faylasha M4V-keeno uun ka album in ay Jadwalka ugu hooseysa ee app this.
Sare ee cas Time Tusiyaha dhaqaaq booska saxda ah ee aad doonayso (Fiiro gaar ah: waqtigan, waxa kale oo aad u baahan tahay inaad jiidi bar slider haddii loo baahdo). Next, riix batoonka maqas-sida ay u kala soocaan faylka. Ugu dambeyntii, riix "Save sida" doorasho ee dhinaca kore ee bidix ee ay interface si loo badbaadiyo mashruuca iibsan archive. Continue aad mashruuca Sidaad u baahan, taas oo muujinaysa sida soo socota:
Xaaladda ka mid ah: aad clips rabin xiir
Just tirtirto aad clips ku qancin M4V ay xaq u riixaya "Delete" doorasho.
Xaaladda laba: Iska yaree file weyn M4V galay kuwa yar yar
Ka dib markii aad ka gooyay file a M4V weyn galay clips ka yar dhawr, aad u baahan tahay si loo badbaadiyo mashruuca sidii ay kor ku xusan ee ku xusan. Markaas, dooro mid ka clip iyo tirtirto kuwa kale oo dhan. Next, dhoofin clip hal by socda tallaabada 3. Si loo dhoofin clip kasta file hal, kaliya aad u baahan tahay inaad soo dhoofsadaan mashruuca badbaadiyey mar kale iyo mar kale, iyo dhoofin clip kasta si la mid ah.
3 dhoofinta hal M4V clip galay file cusub
Guji ee "Samee" button ka dibna ku dhuftay "Qaabka" tab ee suuqa kala dhisayaa-upka. Haddii aad rabto in aad ka ciyaari files wax soo saarka ee qalabka sida iPod, halkan, waxaad si toos ah u dooran kartaa qaab filaayo in sida qaab wax soo saarka. Just ku dhufatey "Device" tab halkii ka dibna waxa aad rabto in aad halkan. Waxa kale oo aad ku gubi kartaa M4V video cusub si DVD ama geliyaan on Facebook iyo YouTube.
Sida loo Edit M4V Video Files
Sida loo soo biir M4V Video Files
Sida loo Split M4V Video Files